Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » धनी कसरी बन्ने ?
२०७७ साउन ३१ गते शनिवार ०९:४२
१) आफ्नो मूल्य बढाउनुहोस् जो सुकैलाई तपार्इँको सीप र कामले गर्दा पैसा दिनुपर्छ है भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन जरुरी छ । यदि तपाईँले अरु थोरै मान्छेले मात्र गर्न सक्ने काम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको मूल्य स्वभाविक रुपमा...
१) आफ्नो मूल्य बढाउनुहोस्
जो सुकैलाई तपार्इँको सीप र कामले गर्दा पैसा दिनुपर्छ है भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन जरुरी छ । यदि तपाईँले अरु थोरै मान्छेले मात्र गर्न सक्ने काम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढ्छ ।
जस्तो डाक्डर पाइलट, इन्जिनियारको आम्दानी धेरै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो ज्ञानमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ ।
२ आफैँले कर लगाउने तरिका
पैसा बचत गर्ने कुरा नयाँ होइन । तर पनि यो सजिलो पनि छैन । यो नयाँ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि सरकारले हामीबाट कर लिइसकेपछि पूरा फिर्ता अथवा पैसाकै रुपमा फिर्ता आउँदैन ।
हामी त्यसैगरी आफ्नो केही रकम चलाउन नसकिन गरी वैंकको िफिक्स डिपोजिट अथवा त्यस्तै कुनै कुरामा राखौँ तब सम्म जब हामी एकमुष्ट रकम निकाल्यौँ ।
३ योजना बनाऊँ र योजनामा चल्ने बानी बसाऊँ
अकस्मत धनी भएको मान्छे धेरै समयसम्म धनी भैराखेको कमै देखिन्छ । संसारका प्राय मान्छे त्यसै धनी भएका होइनन् । धनी बन्न एउटा नभई नहुने तत्व योजना बनाउने बानी र अनुसासन हो ।
४) लगानी गरौँ
लगानी गर्नुको मुख्य अद्देश्य भनेको खर्च भन्दा आम्दानी बढाउनु हो ।अब कुरा आउँछ लगानी कहाँ गर्ने लगानी गर्ने भेट्टाउन अनुसन्धान गर्नु नै हो । धनजग्गा सेयर, कोरोबार आदि जस्ता क्षेत्रमा लगनीको प्रख्यात श्रेत्र हुन् ।
५) आफ्नो व्यवसाय सुरु गरौँ
आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नु कुवाबाट समुन्द्र प्रवेश गर्नु हो । कामको वा आम्दानीको कुरामा यसको सम्भावना असिमित हुन्छ । आफ्ना मालिक आफैँ बच्नु जस्ता फाइदाको के कुरा गर्ने ?
६) सहयोगी बनौँ
थोरै धनी मान्छेहरुको अनुभव के छ भनी हामी जति राम्रो कामको लागि पैसा दान गर्छौ । यो झन् बढिरहेको हुन्छ । केही अर्थशास्त्रीहरुको पनि के मान्यता छ भने पैसाको स्वभाव भनेकै उपयुक्त खर्चमा बढेर आम्दानी हुनु हो ।
७) धैर्यताको विकास
सफलता रातारात आउने कुरा होइन । यसको लागि धैर्य भएर काम गर्न र उचित समयमा लगानी गर्ने योजना कार्यन्वयन गर्न सक्नुपर्छ । धैर्यता हुनु भनेको जोखिम नबढाउनु होइन धन जोखिम मोल्नेहरुलाई प्रेम गर्छ ।
८) आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउँ ?
ऋाजको विश्वलाई सूचनाको जमनाको त्यसै भनिएको होइन । यो संसारको अवस्था बगिरहेको बाटो जस्तो पत्ता लगायो । जो जमानाअनुसार पाहिला चाल्यो । ऊ हरेक कुरामा अगाडि हुन्छ । आम्दानीको अवसर ज्ञानको दायरा फराकिलो नभई आउँदैनन् । त्यसैले जतिसक्दो किताब समाचारसँग साक्षत्का हुन कोसिस ग¥यो ।
९) हचुवाको भरमा जोखिम नलिऊँ
जहिलेपनि जोखिम लिँदा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै लिने गरौँ । जोखिम नलिई धनी बन्न सकिँदैन ।
प्रकाशित मिति ३१ श्रावण २०७७, शनिबार ०९:४२